Into elula njengokuhlala nawe | Uncwadi lwangoku
Kubathandi beBlue Jeans sizisa iindaba ezimnandi. Ngo-Epreli 4, inoveli ekudala ilindelwe kunye neyokugqibela kwi-saga "Into elula kangaka" yaphuma.
Namhlanje kuncwadi lwe-Actualidad, sikubonisa uphononongo lwe le noveli iphelisa, kwii-adventures kunye ne-misadventures zamakhwenkwe kwiholo 1B.
Akululanga ukuthi ndlela ntle kwaba bantu basenze sancwina kwaye sahlupheka kakhulu, nangona kunjalo, njengayo yonke into ebomini, kufuneka sivale izahluko. I-Jeans eluhlaza okwesibhakabhaka iyakwazi ukuthi ndlela-ntle kolu ngcelele ngendlela ethe-ethe nenempumelelo kakhulu.
"Into elula njengokuhlala nawe" yinoveli egcwele imvakalelo, apho iinkxalabo kunye neengxaki zakhe nawuphina umntu osemtsha ziboniswa, Yiyo loo nto esenza ukuba umfundi afune ukurhola ukusuka kwiphepha lokuqala ukuya kwiphepha lokugqibela.
Inkohliso, ukungcatsha, ukukhohlisa, iziyobisi, imiceli mngeni engenakwenzeka, ukusweleka kwaye kunjalo, uthando, iintlungu. Zonke ezi mvakalelo zibonakaliswe kwinoveli, ukudala umoya woxinzelelo kunye novelwano ukuba ababhali abambalwa kolu hlobo baphumelele.
Abo kuni abangakhange balunandiphe ukufunda iinoveli ezimbini ezidlulileyo bangakhathazeki. I-Jeans eBlue ibhengeza ibali ukusuka kwindawo apho ungasayi kuphoswa khona naziphi na iinkcukacha.
Kubalandeli kunye nabalandeli boluhlu "Into elula ..." asizukuchaza kakhulu, kodwa siza kuthi Siza kukushiyela umkhondo omncinci wento oza kuyifumana.
Emva kokuhamba okungalindelekanga kuka-Manu, kufika iindaba ezivela e-Edinburgh eziza kwenza ukuba oogxa bakhe beme ngeenwele. Ngaphandle kwemizamo ka-Iria yokulibala ngaye, uthando lunokwenza yonke into, kwaye ke umfazi waseGalician akazukufumana kulula ukuyeka iimvakalelo zakhe.
U-Elena uzifumana ekuphambukeni phakathi kukadadewabo uMarta noDavid, nangona kungengenxa yothando kuphela. Umntu onokutshintsha ubomi bakho uya kuwela umendo wakho. Izigqibo eziza kwenziwa nguElena aziyi kuba lula kwaphela.
UToni no-Isa ... ukuba "ewe kodwa hayi" uya kugqibela ngokungangxengi uToni, nangona eya kwenza into engenakwenzeka ukufumana uthando lwe YouTube, unokumangaliswa sisiphumo seli bali.
I-Ainhoa ​​kunye ne-scar ibonakala ngathi iyabuqinisa ubuhlobo babo, nangona ubuhlobo bungenakuba kuphela kwento emi phakathi kwabo.
UJulen othandekayo kuya kufuneka ajongane nenye yezona zinto zinzima kunokujongana nobomi. Ukuza kuthi ga apha singabala.
Iinkcukacha zokugqibela ... Sinentombazana entsha eofisini, okanye mandithi, kwigumbi awayehlala kulo uNicole. Kodwa ... ukubonakala kunokuba kukukhohlisa.
Liyintoni ikamva labathandi bethu abathandekayo? Ungaphoswa lolu fundo. "Into elula njengokuba uhlala nawe" kukukhenkceka kwikhekhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Into elula njengokuhlala nawe
Uphengululo ngu _Bull Mountain_. Ityala elikhulu likaBrian Panowich